ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “စိဉ္စမာဏ မသိနိုင်ပါ”
စိဉ္စမာဏ လို့ ပေါင်းပါတယ်..
>>>N3…. ကျေးဇူးပဲ။ ကျနော်လည်း အဲသလို ပေါင်းတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ သို့သော် အင်တာနက်ပေါ်မှာ လိုက်ရှာရင်း ဒီစာအုပ်မှာ("http://www.scribd.com/doc/6193605/-") ကြည့်လိုက်တော့ နငယ်နဲ့ ပေါင်းထားတာကို တွေ့လိုက်မိလို့ မတင်မကျနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။
“ဆရာမ… ဒီလူနာကို ဆေးတိုက်လိုက်ပါ”…ပေါ့။
မင်းဟာမင်းသောက်ပါလား ငါမရူးဘူးကွ.. အရူးမငါ့ကိုဆေးတိုက်ဖို့လုပ်နေတယ်.. အံမယ် ဟိုအရူးကြီးက ဘာလို့ငါ့ကိုဆေးတိုက်ခိုင်းတာလဲ မင်းရူးနေရင် မင်းဟာမင်းသောက်ပါလား.. သောက်ဖူးဟေ့.. သောက်ဖူး.. ငါမရူးဘူး. ငါမရူးဘူး
>>>Yu Wa Yi…. ကျေးဇူးပဲ မယုဝရီရေ….. ကျနော် အခုပဲ သွားဖတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီ။ ဆက်ပြီးတော့လည်း စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ စိဉ္စမာဏရယ်၊ အင်္ဂုလိမာလရယ်၊ နာဠာဂီရိဆင်ရယ်…. အဲသည်သုံးယောက်ဟာ ဆရာသမားနဲ့ တစုံတယောက် ပယောဂကြောင့် လမ်းမှားကို လိုက်မိကြတာနော်။ ဆရာသမား အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ဗာလာနံ သူမိုက်တို့ကို မပေါင်းသင်း၊ မမှီဝဲရခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာတပါးဆိုတာ တယ်မှန်သကိုး။
ကွန်းမင့် မရေးဖြစ်တာကြာပေမဲ့ အမြဲလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ကိုပေါ..။ ကိုပေါ ပြောပြောနေတဲ့ "ကျော်ဖြတ်ရမယ်"ဆိုတဲ့ 'ဆေးရိုးသည်တွေ'ရဲ့ အသားလွတ် ကွန်းမင့်အဖျင်းတွေကို စိတ်ကုန်လို့၊ မရေးတာလည်း ပါပါတယ်။ ဒီ ပို့စ်က တိုတိုလေးနဲ့ တကယ်ထိ၊ တကယ်ကြိုက်ပါတယ်။
ခက်တာက ဒေါက်တာအုန်းမောင်ရဲ့ ward ထဲက'လူနာ'တွေ တနေ့တခြား များလာနေသလားလို့..။
စိဉ္စမာဏ၀ိကာ လို့ဖတ်ဖူးပါတယ်... မာဏ၀ိကာဆိုတာ အမျိုးသမီးငယ်လေးလို့ မှတ်မိပါတယ် ...။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်ကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတဲ့ အကောင်းဆုံးဗီလိန်တွေထဲက တစ်ယောက်လို့မြင်မိပါတယ် ...။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်..ကျွန်မလဲ ယက်တောကိစ္စဖြစ်တော့ အဲဒီကဗျာလေးကို သွားသတိရမိပါသေးတယ်။ ကဗျာလေးကတော့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ တကယ့်ကို ကွက်တိပါပဲ။